ဘင်စင်ဓာတတ်ဆီလျှပ်စစ်မီးစက်, လျှပ်စစ်မီးစက်, မီးစက်, မီးစက်အသေး
1. PATCO 2200 ขนาด2KVA 220V 50Hz.
1. PATCO 2200 အရွယ်အစား2KVA 220V 50Hz.
2. PATCO 3000 အရွယ်အစား3KVA 220V 50Hz.
3. PATCO 5000 အရွယ်အစား5KVA 220V 50Hz.
4. PATCO 7000 အရွယ်အစား7KVA 220V 50Hz.